BACELA UXHASO ABASHELWA INDLU – Sivubela intuthuko Newspaper
Ugogo Philisiwe Madolwana ucela uxhaso ngezinto zokwakha nezasendlini
UCELA uxhaso umdeni wakwaMadolwana eWaterloo emva kokuba indlu yabo yasha yangqongqa ngenyanga ka Febhuwari nonyaka. Lomndeni onamalunga angama-11 uthi isimo asisishle kulelikhaya njengoba behlala emijondolo futhi becinene. Ugogo Philisiwe Madolawana ona 70 uhlala namadodakazi akhe amabili kanye nabazukulu abayisithupha emjondolo oyikamelo elilodwa. Abantwana balinganiselwa eminyakeni emibili kuya kweyishumi kanti omncane kunabo bonke unezinyanga eziyisishiyagalolunye.
Ngokusho kuka gogo Madolwana indlu yasha emva kokuba kwakucime ugesi nokusolakala ukuthi ngenkathi usubuya kwaba khona okuthintekayo kwase kuthungeleka umlilo. “Ngafonelwa indodakazi yami ngese Verulam lapho ngizidayisela khona ingitshela ukuthi kuyasha endlini. Ngathuka ngoma ngoba ngangihambe ugesi ungekho,” kusho ugogo Madolwana.
Uthi umndeni wakhe uhlezi kabuhlungu njengoba bengakabi nawo amandla okwakha. “Okubuhlungu kakhulu sihleli simpintshene endlini eyodwa nabazukulu. Abafana bahlala komunye umjondolo. Besingacela nje usizo kunoma ubani ongalula isindla ngezinto zokugqoka nezokwakha,” kusho ugogo Madolwana.
Ngokusho kwalomndeni kwasha yonke into eyayisendlini basala nezimpahlana ezincane abakwazi ukuthi baqala ngaze kabusha. “Savele saludiliza nodonga ngoba yayingeke isalungiseka iding aukuqalwa phansi. Bakhona osomabhizinisi basendaweni asebesisizile basilethela amabhulokisi okwakha angu 400, isihlabathi kanye namatshe. Kusekuningi esishoda ngakho njengosimende, izinto zasendlini kodwa singajabulela nona iluphi uxhaso esingaluthola,” kubeka ugogo Madolwana.
Lomndeni uthi usuzamile konke okusemandleni ukuthi bakhe kodwa akukho okulungayo ngoba imali yempesheni kanye neyesondlo sezingane yanele ukuba badle baphinde bagqoke njengoba besaqongelela izinto. “Angifisi ukufa ngishiye abantwana bami bekulesimo. Umoya wami ngeke uphumule uma bengenalo ikhaya engibashiya nalo ngisho ngabe kuthiwa ihholo akusenani kodwa kuyobe kuyikhaya,” kuzikhalela ugogo Madolwana.
Njengoba kuyisikhathi sasebusika lomndeni uthi kuyazwela njengoba behleli kulomkhukhu obandayo uma kubanda ushishe uma kushisa. “Isifiso sami nje esikhulu ukubashiya benekhaya ngoba uma ngingasekho koba nzima ukuba bakhe njengoba engekho osebenzayo ekhaya,” kusho ugogo Madolwana